Xoghayaha Joogtada ee Wasaarada Arimaha Dibada Kenya, Oo Sheegay Inay Somaliya Soo Dabacday Kadibna Wada Hadli-doonan | Marsa News
Xoghayaha Joogtada ee Wasaarada Arimaha Dibada Kenya, Oo Sheegay Inay Somaliya Soo Dabacday Kadibna Wada Hadli-doonan
November 1, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau oo la hadlayay telefishenka Citizen ee Kenya ayaa ka hadlay muranka xadka ee badda ee ay isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya.
Macharia Kamau ayaa sheegay in aysan wax dhib ah ku qabin shacabka Soomaaliya, balse maamulka hadda jira uu yahay waxa ay is hayaan.
”Dabcan wuuu naga dhexeeyaa muranka xuduudda, balse waxaa dabada ka riixaya hogaanka Soomaaliya oo si asaasi ah ugu guul dareystay in uu ka mahadceliyo ama garto waxa naga dhaxeeya,” ayuu yiri.
“Soomaaliya waa dal aan daryeelno. Kenya waxaa uga baxay dhiig iyo dhaqaale aad u badan”, ayuu hadalka ku sii daray.
“Dadka Soomaaliya inaga ma soo horjeedaan ee caqabada aan wajaheyno waxay tahay sida maamulka hadda jira uu u fasiranayo muranka xadka ee naga dhaxeya.”
“Waxaan fileynaa in arrinta badda laxaliyo, maxaa yeelay wax dhib ah kuma qabno shacabka Soomaaliya ee waxaan ku dhib ku qabnaa maamulka hadda talada haya,” ayuu yiri Macahria Kamau.
Macharia wuxuu tilmaamay in sanadihii 2014, 2015 ay ku hawlanaayeen sidii loo xallin lahaa arrinta, kahor inta aanan la geynin maxkamadda ICJ, wuxuuna intaa raaciyay in ay la yaabeen Soomaaliya markii ay kiiska u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ.
”Waxaan Soomaaliya weydiinay, ‘maxaad inoo geyseen Hague? Maxkamadda waa waxa ugu dambeeya ee la aado. Marka hore aan isla eegno fursdaaha lagu wadahadli karo oo dhan,” ayuu yiri xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya.
“Deris ahaan ma ahan in aad i geyso maxkamadda iyadoo weli uu inoo socdo wadahdal ku aadan arrintan oo aad aaminsan tahay in ay jirto, balse anaguna aan aaminsan yahay in aysan jirin,” ayuu raaciyay.
Wuxuu ku adkeystay in Soomaaliya ay u aragto in arrinta muranka xuduudda ay jirto balse iyago ay “og yihiin in wax jira aysan ahayn”. “Sababtoo ah waxaa jiro fahan ah sida xuduudeheena sida ay u waafaqayaan xebaha Bariga Afrika”.
“Waxaa murugo ah in aan is argnay inagoo maxkamdda taagan”, ayuu yiri.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaan weli wax jawaab ah ka bixin arrintan. Balse Soomaaliya waxay horey ugu adkeysatay in go’aanka maxkamadda oo keli ah lagu kala baxayo.
Dowladaha Itoobiya iyo Masar ayaa isku deyay dhinacyada in ay dhexdhexaadiyaan. Kullankii ugu dambeeyay ee ka dhacay Mareykanka waxaa la sheegay in lagu heshiiyay kawada shaqeynta soo celinta xiriirka labada dhinac, balse aan laga wadahadal muranka xuduudda badda.
Macharia Kamau wuxuu Citizen TV u sheegay in ay go’aansadeen in Soomaaliya ay kula loollamaan xittaa maxkamadda, xitaa haddii aysan ku waafaqsanayn. “Waa haddii maxkamadda aysan sinnaba ku dhaqmeynin wax aniga ay nooga eexaneyso”, ayuu hadalka raaciyay.
“Haddana waxaa inoo muuqata oo aan aragnaa arrintaas, waana taas sababtay keentay in maxkamadda aan ku dhahno waxaan idin ka fileynaa in ay inoo la dhaqanto qaab waafaqsan xeerarka caalamiga.
Waxaa kale oo uu Macharia sheegay in dhigiisa Soomaaliya uu wadahadal heer sare ah kula yeeshay magaalada Hague ee dalka Netherland, mar aan sidaas u fogeyn, xiligaas oo ay ka wadahadlayeen dib u dhigista dacwadda oo markii dambe la oggolaaday.
“Waxay ila tahay in ay soo dabceen (Soomaaliya), waana isla wadahadleynaa. Dhowaan madaxeena maamulka ayaa booqday (Muqdisho) si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyay. Anigana wadahadal wax ku ool ah ayaa la yeeshay dhigeyga markii aan Hague ku sugneyn, xilligaas oo aan ka hadleynay dib u dhigidda kiiska”, ayuu sheegay.
Kiiska ayay maxkamadda dib u dhigtay illaa bisha June ee sannadka soo socda, taas oo Macharia uu ka yiri: “waa wixii aan dooneynay. sannad baan rabnay waana helnay wax ku dhow.”
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo la weydiiyay waxa ay ka yeeli doonaan go’aan walba oo ka soo baxa maxkamadda wuxuu yiri: “Anagoo ka duuleyna waxa ay ku saleyaan go’aankeeda, waxaan eegi doonaa wuxuu noqdo go’aanka, anaguna go’aan ayaa ka gaari doonaa”.
“Waa wax u madaxbanaan in dal kasta uu go’aansado in uu aqbalayo xukunka maxkamadda, marka la gaara xiligaas na go’aan ayaan gaari doonaa”. Ayuu markale raaciyay Macharia.
Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa mar labaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Warbixin qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay go’aansatay in dib loo dhigo dacwadda badda, waxaana maxkamaddu sheegtay in labada dhinac loo garnaqi doono siddeedda ilaa 12-ka bisha Juun ee sanadka dambe.